Akhriso Oo Ha Yaabin: Tirada Goolhayeyaasha PSG Ay Ku Haysato Kooxdeeda Oo Koowaad Oo Noqon Karaya Naadi Naadi Dhamaystiran - Laacib
HomePSGAkhriso Oo Ha Yaabin: Tirada Goolhayeyaasha PSG Ay Ku Haysato Kooxdeeda Oo Koowaad Oo Noqon Karaya Naadi Naadi Dhamaystiran
Akhriso Oo Ha Yaabin: Tirada Goolhayeyaasha PSG Ay Ku Haysato Kooxdeeda Oo Koowaad Oo Noqon Karaya Naadi Naadi Dhamaystiran
July 15, 2021 Abdiwahab Ahmed PSG, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Kooxda kubadda cagta PSG waxay Khamiistii si rasmi ah ula saxeexatay goolhayaha xulka qaranka Talyaaniga ee Gianluigi Donnarrumma oo ay kala soo wareegtay AC Milan oo uu ugaga yimid qaab bilaash ah, laakiin laacibkan ayaa tegay Parc des Princes oo ay joogaan koox dhamystiran oo goolhayeyaal ah oo uu isagun sii dul-buuxin doono.
Laacibkan ku guuleystay uro 2020 iyo xiddigii ugu wanaagsanaa tartankaas, ayaa qalinka ku duugay heshiis san sannadood ah, waxaase u taalla shaqo adag oo ah inuu goolhayaha koowaad kula tartamo Keylor Navas oo uu tababare Mauricio Pochettino kalsooni badan ku qabo.
Kaddib saxeexii Donnarumma, tababaraha reer Argentina ayaa hadda u baahan oo kaliya inuu helo laba ciyaartoy, si uu ugu soo bilaaban karo 11 goolhaye, waxaana uu haystaa tiradii ugu badnayd ee goolhayeyaal ah ee ay koox iskugu keento meel.
PSG ayaa waxa saxeexii Donnarumma kaddib loo diiwaangeliyey SAGAAL goolhaye oo kursiga kaydka iskaga sii kala dambeeye.
Xilli ciyaareedkii hore, Navas ayaa ahaa dookha koowaad ee kooxda, waxaana kaydka u fadhiyey Sergio Rico oo hore ugu soo ciyaaray kooxaha Fulham iyo Sevilla, laakiin waxa kale oo ay PSG haysataa laba goolhaye oo kale oo min 21 jirro ah, kuwaas oo kala ah Marsin Bulka iyo Garissone Innocent.
Waxa kale oo soo raaca, laba goolhaye oo aad loo qiimeeyo, laguna tilmaamo inay leeyihiin mustaqbal ciyaareed oo weyn, waana Lucas Lavelle iyo Denis Franchi oo 18 jirro ah.
Inta oo kaliya kuma eka goolhayeyaasha PSG, waxaana jooga Alexandre Letellier oo 30 jir ah, dhowaanna saxeexay heshiis cusub inkasta oo aanu hal kulanna u safanin kooxda.
Sagaalka goolhaye ayaa waxa dhamaystiraya Alphonse Areola oo waqtiyo amaah ah kusoo qaatay Real Madrid iyo Fulham, laakiin la filayo inuu xagaagan ka tago, kuna biiro West Ham United.